मधुपर्क – मझेरी डट कम
by Yubraj Bhandari
छातीभित्र मुटु रुन्छ बाहिर भने हांसेको छु
आफ्नै मनको दुनियामा वैरीभई बांचेको छु ।
शुन्यतामा उडे सपना सिमलको भुवासरी
व्यथाहरु विनास्वरै अलापेर बसुं कति ?
आफ्नै आकाश चिथोरेर सपनाहरु सांचेको छु
छातीभित्र पहाड बोकी बादल बनी उडेको छु ।
छातीभित्र मुटु …………………
सपनीमा रोपेको फूल मनैभित्र ओइलाई झर्यो
जहां जाउ आज मलाई आफ्नै सासले पोल्न थाल्यो ।
चुंडिएको जीवनरेखा आज फेरि गांसेको छु
ओइलाएको फूलमाथि शीत बनी बर्षेको छु ।
ए, यायावरहरू हो !
ढुङ्गो दुख्छ –
यो ढुङ्गोमा कुल्चेर नहिंड ।
वाँच्नुका सबै सबै प्रकृयाहरूको सेवोटेज’
हाँस्नुका सबै सबै पद्धतिहरूको सेवोटेज’-
अन्त्यहीन जन्महरूको मृत्युउत्सव
चुपचाप सह्यो – यो ढुङ्गोले,
भो अब यसको छातीमा यसरी
नाचेर नहिंड ।
by samarpit prakash
एक दिन झरी परिरहेका बेला
मैले सम्झिएँ मेरी प्रिय सखा सर्वरीलाई
रूखका हरिया पातहरू निरन्तर
वर्षामा रमाइरहेका बेला
यौटा पत्र लेख्ने प्यास गर्दैछुँ
अर्कै दुनियाँमा रहेकी मेरी प्रिय सर्वरीलाई
आज ई.सं.२००२ डिसेम्बर १ का दिन ने.फ्रा. कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनीको बोर्डको बैठक चलिरहेछ।
बैठक कोठामा पियन प्रवेश गर्छ। अध्यक्षलाई कागजको एउटा चिट दिन्छ। अध्यक्ष उक्त कागजको चिटमा लेखिएको कुरो पढेर एकाएक आश्चर्यमा पर्छ। त्यो चिट बोर्डका आठै सदस्य पढ्छन् र आ-आफ्नू अनुहारमा उत्तिकै आश्चर्य प्रकट गर्छन्।
अनौपचारिक – सलाम आस्थाका सतिसालहरू
असल मित्रहरूसँगको अनायास बिछोडले सधैँ नै पीडाको नमिठो चोट छाडेर जान्छ । यस्तै पीडाको अनुभव गराएको छ मित्रद्वय रूद्र खरेल र अग्नि शिखाको असामयिक तथा अप्रत्यासित बिछोडले। आस्था र प्रतिबद्धतामा सतिसालझैँ अडिग र सरल जीवन शैलीका प्रतीक लाग्ने यी दुई प्रगतिशील साहित्यकार-पत्रकार मित्रलाई छोटै समयमा एकपछि अर्को गुमाउनुपर्दा मजस्ता धेरैमा बिछोडको पीडाबोध हुनु स्वाभाविक थियो ।
विश्वसामु हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली भनेर गर्व गर्ने आधारहरूमा माटो र भूगोल मात्र नभई हाम्रा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिहरू पनि उत्तिकै बलिया आधारस्तम्भका रुपमा रहेका छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राष्ट्रका रुपमा आˆनै मौलिक पहिचानका पर्व, परम्परा र संस्कृतिहरूका विशेषताहरूले परिपूर्ण छौँ हामी । धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सहिष्णुतामा बाँधिएको हाम्रो आˆनोपन नै हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो ।
कमला रिसाल 'अश्रु'
चोखो माया प्रीति पनि मिल्छन् आफ्नै गाउँघरमा ।
जब आकाश छ्याङ्ग उघ्रन्छ
जुनको उज्यालो उसको अटालीमा पोखिन्छ
मनभरी उत्साहै उत्साहको फूल बोकेर
सेता हिमालको पोल्टामा
जीवन क्रान्तिका लागि
सँगै नहुँदा रातै हरायो ।
भुइँचालोले भासिएको एकादेशको सहर भयो ।
अनि देश रुन्छ रुन्न भनिदेऊ नेता हजुर
यात्रा आरम्भ गरौँ ढिलो नगरौँ
यतिबेला शुभसाइत छ
पारि गाउँमा भाले बास्न थाल्यो
बिहानीपखको पारिलो घामको न्यानोले
हाम्रो जीउ तातिएको छ
हाम्रो तनमनमा स्फूर्ति जगाएको छ,
बेलैमा यात्रा थालौँ ।
भत्कियो सारा रहरहरू
तिमीले अर्कै मोड लिँदा
फुलेका केशझैँ सेता हिमाली टाकुरा शिर
हरियो फरिया लामै लत्रेको छ यतातिर
खास्टो ओढाइ डुल्दै छ पाखामा मेघ निर्मल
कुन्नि केले भिजेको छ आमाको शुभ्र आँचल ।
त्यहाँका पाखा पखेरामा
एक्लै टोलाएर हेरिरहने
बूढो शिरीषको रूख र
तिलचाम्ले कपाल फुलेको रत्नपार्क
आँखाको भाषामा पनि हुँदोरहेछ
मनको गहिराइमा पनि हुँदोरहेछ